Fampanarahan-dalana sy fandriampahalemana :: Depiote maromaro nihaona tamin’ny jeneraly Ravalomanana Richard • AoRaha
Fampanarahan-dalana sy fandriampahalemana Depiote maromaro nihaona tamin’ny jeneraly Ravalomanana Richard
Nifanesy tonga teny Betongolo, toeram-piasan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ireo solombavambahoaka ampolony, omaly tontolo andro. Voaresaka tamin’ny fihaonan’izy ireo sy ny jeneraly Ravalomanana Richard ny lafiny fifanampiana amin’ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana.
Nifandimby nigadona teny Betongolo ireo olomboafidy ireo fa tsy niaranirona. « Tsy hanao toy ny ranon’ Ikopa aho ka tonga namana vao ho mavomavo. Tonga hijery ny fomba hanampian’ izy ireo amin’ny ady atao amin’ ny tsy fandriampahalemana any amin’ireo distrika misy azy avy ireto olom-boafidy ireto. Voafidy tany amin’ny faritra mena avokoa ny ankamaroan’ izy ireo. Misy ny paikady sy ny toky nifanaovana amin’ny fifanomezan-tanana. Arakaraka ny toerana io paikady io. Nahatsapa ihany koa izy ireo fa ahitam-bokany ny fomba fiasa ato amin’ny Zandarimaria ka tsy nisalasala nankahery sy nampirisika ny fanohizana izany », hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (SEG).
Lalàna ho an’ny rehetra
Voaresaka ny momba ny fisian’ny solombavambahoaka voalaza ho manao fandikan-dalàna ka arahimaso ankehitriny. Hentitra ny jeneraly Ravalomanana Richard raha nanamafy ny fampitoviana ny rehetra eo ambanin’ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana, na iza izy na iza.
« Samy miezaka manome ohatra amin’izany fampanarahan-dalàna izany avokoa ny Filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra ary izahay mpikambana ao amin’ny governemanta. Misy mpiaramiasa akaiky aminay sy havana filohana andrimpanjakana aza no naiditra amponja. Tsy misy ny mahitahita na fitsabahana amin’ny fahaleovantenan’ny mpitsara anefa tamin’izany rehetra izany. Ny tato amin’ny Zandarimaria manokana dia roapolo mahery izao no naiditra am-ponja tamin’ity taona ity. Tokony hanaraka an’izany avokoa ny rehetra fa tsy misy ny mizana tsindrian’ila », hoy hatrany ny SEG.
Fanodinana voka-pambolena :: Nahazo fankatoavana 100% ny lalàna mifehy ny toaka gasy
Fitaterana goragora :: Manomboka mameno seza ireo taksibe sasany